Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment यी हुन्, मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय - Pnpkhabar.com
काठमाडौं, साउन २२ : सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्षमा डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गते बसेको बैठकले काभ्रेका डा. उप्रेतीलाई सो पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले रिक्त रहेको लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । उहाँले बुधबार पदभार ग्रहण गरिसक्नुभएको छ ।
भट्टको नियुक्तिलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र र बाहिरपनि आलोचना भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीबार सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले सहसचिव वीरबहादुर राईलाई सचिवमा बढुवा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, बेरुजु फर्छ्योट मूल्यांकन र अनुगमन समितिको सदस्यसचिवमा रमा जोशी दुलाललाई दुई वर्षका लागि मनोनयन गरिएको छ ।